Ikhaya I-OCEANIA FOOTBALL STORI I-Mile Jedinak Ingane Yendaba Nombhalo we-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba ephelele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngeSiteketiso; "Ivevu Eyesaba". Indaba yethu ye-Mile Jedinak yobuntwana kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokuzalwa kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, impilo yomndeni kanye namaqiniso amaningi angaziwa ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngobuciko bakhe bobuholi kodwa bambalwa abheka i-Bio yethu yakwa-Mile Jedinak ejabulisa kakhulu. Manje ngaphandle kokunye okulandelayo, ake siqale.
Mile Jedinak Ingane Indaba Indaba Untold Biography Facts -Isiqalo sokuphila
Igama lakhe langempela nguMichael John Jedinak. Wazalelwa ku Usuku lwe-3rd ka-Agasti 1984 ku ESydney, e-Australia. UMichael unomdabu waseCroatia kanye nesidlaliso sakhe 'Mile' ingenye yalezi ziqephu ezibizwa ngegama elisemthethweni.
UMile wakhulela njengengane encane emadolobheni aseRooty Hill ase-Rust Hill, eSydney nabazali bakhe nogogo nomkhulu, abafowabo nodadewabo. Ngempela, Uma uqonda indawo, abantu abahlaselwa phansi, izikhathi ezinzima abaye bahamba nazo, uthola ukuqonda kahle indlela i-Mile Jedinak eyakha ngayo amandla engqondo nokuzimisela ukuqhubeka nokuphumelela kwelinye lebhola elikhulu izigaba.
UJedinak wake wakhumbula. "Ugogo nomkhulu babekhona kule ndawo ngakho-ke saba nenethiwekhi enkulu yomndeni. Umama nobaba basebenza kahle. Kungenzeka ukuthi bakwenza kanzima kanzima, kodwa bengingasho ukuthi kwakunzima kakhulu. Into, ukuthi yini abayitholile basebenze kanzima ukuthola. Akuzange kube lula futhi ngicabanga ukuthi ukukhuliswa kwami ​​okuningi kusekelwe ekusebenzeni lokho ongayithola. Ngibheka emuva futhi ngingasho ukuthi lezi zimiso ezikhulayo yizinto engiziqhenyayo kakhulu futhi ngibonga kakhulu abazali bami ngendlela abangikhuphula ngayo. "
Njengengane, uMile waya eSt Augustine Catholic High School eRooty Hill. Esikoleni kwakuyiqembu lezemidlalo. Wathandana nomdlalo futhi wakwenza waba nesifiso sakhe kanye nokusebenza esikhathini esizayo kusukela esemncane. Ngesikhathi esikoleni, uMile wahlanganyela futhi wahola ithimba lakhe ukunqoba emincintiswaneni eminingi. Ukukhunjulwa kwakhe kwakuyi-PDSSSC, umncintiswano owawuphikisana nazo zonke izikole zamaKatolika zase-Australia.
Ngemva kokukhula kwakhe, uMil wathatha ibhola eqenjini elilandelayo ngokubhalisa noSydney United ngenxa yentsha yakhe. I-Mile yaqhubeka yaba yintandokazi yeqembu njengoba engena ohlangothini lwabo oluphezulu. Ukuze athole ulwazi oluthe xaxa, waya eCroatia (NK Varaždin), naseTurkey (Antalyaspor) ku-Loan ngaphambi kokuhamba eYurophu nalapho ehamba khona waba ngumphathi weCristal Palace kanye nesizwe sakhe. Njenge Mark Viduka, ukubamba izwe lakhe kusho umhlaba kuye nakwabanye, njengoba besho, manje umlando
Mile Jedinak Ingane Indaba Indaba Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
Ku-2010, uJedinak washada noNatalie Peacock. Babesebudlelwaneni isikhathi eside futhi banesibopho esihle nomunye nomunye. Lo mbhangqwana uvame ukubonakala emicimbi nemisebenzi ehlukahlukene.
Umkakhe, uNatalie Peacock uyisibonelo esivela eSydney. Lo mbhangqwana unendodana okuthiwa u-Andre ngemuva komshado wabo ku-2010.
Mile Jedinak Ingane Indaba Indaba Untold Biography Facts -Ukuphila Personal
I-Mile inezici ezilandelayo kubuntu bakhe.
Ama-Mile Jedinak Amandla: Uhlakaniphile, unesithakazelo, unomusa, unenhliziyo efudumele, ejabule, ehlekisayo.
Amandla E-Mile Jedinak: Ngesikhathi esithile, i-Mile ingaba neqhosha futhi inenkani.
Yini i-Mile Jedinak ayithandayo: Ngokuqinisekile, uthanda ukuthatha amaholide nokuzijabulisa nabangane.
Yini i-Mile Jedinak engathandiyo: Ukunganaki, ukubhekene nobunzima obungokoqobo, ukungaphathwa njengenkosi noma induna.
Ngokufingqa, uMile Jedinak ungumholi wemvelo ozelwe. Uyamangalisa, udala, uyaziqhenya futhi unamandla.
Uyakwazi ukufeza noma yini ayifunayo kunoma iyiphi indawo yokuphila ozibophezela yona. Ngaphandle kokungabaza, kukhona amandla athile eMile kanye nesimo sakhe se "king of the jungle".
Mile Jedinak Ingane Indaba Indaba Untold Biography Facts -Ukuphila Komndeni
UMichael John uvela emlandweni omkhulu womndeni ophakathi nendawo nabazalwane nodade abaningi. Wayengu-ugogo nomkhulu wakhe owokuqala esuka eCroatia eya e-Australia ngenkathi Eastern Front War okuyingxenye yeMpi Yezwe II.
Umama wakhe nobaba abakhe baseCroatia bafika eSydney njengabantwana futhi bakhulela nogogo nomkhulu babo abangazange bakhulume ngempela isiNgisi. Njengabaningi ngaphambi nangemva kwabo, bazishada, bathenga ikhaya labo lokuqala futhi babona ukuthi umndeni wabo wandisa.
I-Mile ivela emndenini onamagugu ayisisekelo. Emuva komsebenzi ojwayelekile wokufuduka nomndeni, abazali bakaMile Jedinak basize ukufaka zonke izindinganiso ezifanele ezinganeni zabo, i-Mile ngokukhethekile. Namuhla, uMiles ubonakala njengomuntu ozuze isabelo esihle samanani omndeni wakhe esibonakala endleleni ahola ngayo iSocceroos njengoba nje Tim Cahill, UHarry Kewell futhi ULucas Neill okwenzile esikhathini esidlule.
Mile Jedinak Ingane Indaba Indaba Untold Biography Facts -Indaba Ekhuluma Ngegama Lakhe
I-Mile Jedinak yembula ukuthi igama lakhe langempela nguMichael - kodwa lifinyezwe ngenxa yefa lakhe laseCroatia. UJedinak waba intandokazi abalandeli ngesikhathi sakhe sokuqala e-Aston Villa futhi waqamba igama 'I-ndevu kufanele yesabe' i-Villa Park ithembekile.
Amazwe ase-Australia azalwa eSydney kodwa evela emndenini waseCroatia. Uhamba ngesifinyezo segama lakhe, Mile - umemeze Me Lay.
QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu ye-Mile Jedinak Childhood kanye namaqiniso angabonakali e-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona okuthile okungabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana wakho noma uxhumane nathi !.